Madaxweynaha oo gaaray Kismaayo – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliyda mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubba, halkaas oo ay maanta ka dhacayso xaflad lagu lagu caleemo saarayo baarlamaanka Jubbaland.
Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda ayaa ka mid ah wafdiga madaxweynaha. Hoggaamiyaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha.
Wuxuuf ka socota IGAD, Kenya iyo Ethiopia ayaa sidoo kale gaaray magaalada Kismaayo si ay goob jog uga ahaadaan xafladda caleemo-saarka baarlamaanka Jubbaland oo dhawaan la soo dhisay.
Wixii warar ah ee ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonnaa.
Munaasabadda Caleema Saarka Baarlamaanka Maamulka Jubba Oo Kismaayo Ka Socota